News - Waxaan nahay doorashadaada ugu fiican ee aad ku iibsan karto qalabka wax soosaara ee Shiinaha
1. Waxaan diirada saareynaa qalabka nalalka oo kaliya. Waxaan leenahay in kabadan 15 sano oo waayo aragnimo xirfadeed ah oo ku saabsan agabka iftiinka. Waxaan ku leenahay xirfado aaladaha iftiinka leh. Awoodayagu sidoo kale waa agabyo iftiin leh.
2, Inaan iibinno qalabka alaabada leh, waxaan nahay kuwa xirfad badan. Waxaan xirfadleyaal nahay maxaa yeelay dadaal ayaan ku galnay. Waxaan fiiro gaar ah u siineynaa iftiinka waxsoosaarka ， xasilloonida sheyga. Iyada oo ku saleysan hubinta iftiinka nalka dhalaalaya iyo waqtiga nalalka, waxaan taxaddar dheeraad ah siinnaa astaamaha aasaasiga ah ee sheyga. Tusaale ahaan, filimka iftiinka leh, ma lihin kaliya dhalaal wanaagsan oo iftiin leh, marka la barbar dhigo filimka xayeysiinta ee caadiga ah, waxay sidoo kale leedahay astaamaha filimka xayeysiinta dhaqameed: si fudud loo daabici karo, fududahay in la daabaco, ka hortagga gabowga iyo wixii la mid ah.
3, waxaan nahay kuwa debecsan. Waxaan leenahay go'aan deg deg ah iyo fulinta adag.
4. Awooda gudbinta amarku way adagtahay. Waxaan had iyo jeer kuugu soo gudbineynaa alaabtaada tayo iyo tiro ugu yaraan waqtiga ugu yar ka dib markii amarka la helo.
5. Maareynta fikradda maareynta si loo ilaaliyo danaha macaamiisha: tayada badeecada marka hore, si loo hubiyo degenaanshaha badeecada iyo tayada sida xudunta u ah. Deganaanshaha waxsoosaarku waa isha dhammaan danaha. Had iyo jeer diirada saar danaha macaamiisha. Xaqiiji danaha aasaasiga ah ee macaamiisha oo kor loo qaado heerka faa'iidada badeecooyinka. Habka baaskiilka ee PDCA.
5. Falsafada maaraynta si loo ilaaliyo danaha macaamiisha: tayada badeecada marka hore, si loo hubiyo degenaanshaha badeecada iyo tayada sida xudunta u ah. Deganaanshaha waxsoosaarku waa isha dhammaan danaha. Had iyo jeer diirada saar danaha macaamiisha. Xaqiiji danaha aasaasiga ah ee macaamiisha oo kor loo qaado heerka faa'iidada badeecooyinka. PDCA waxay dib u adeegsan kartaa habka dalabka.
6, Awoodda xoogga leh ee shirkaddu waa dammaanadda danaha dhammaan macaamiisha.